जापानको टिकट छोड्दा प्रदिपलाई लड्डु ! – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentजापानको टिकट छोड्दा प्रदिपलाई लड्डु !
September 17, 2018 Tulasa Karki Entertainment, Event, Kollywood 0
हालै जापान सम्पन्न सुर्य ईन्टरनेशनल अवार्ड-२०१८ ” र नेपालमा सम्पन्न एलजी सिने सर्कल अवार्डमा सुर्य ईन्टरनेशनल पपुलर एक्टर अनमोल केसी र एलजी सिने सर्कल पपुलर एक्टरको अवार्ड प्रदिप खड्काले प्राप्त गरेका छन् ।
जापानमा आयोजित सुर्य ईन्टरनेशनल अवार्ड-२०१८ मा जाने कलाकारहरुमा प्रदिप् खड्काको पनि नाम थियो । शुक्रबार नेपालका विभिन्न कलाकारहरुको जम्बो टोलि जापान तिर लागे तर प्रदिप हातमा भिजा र टिकेट लिएर पनि गएनन् । जापना नगएका प्रदिपले यहाँ पपुलर एक्टरको अवार्डबाट सम्मानित भए भने उता अनमोलले ।
जापान नगएका प्रदिपलाई लिएर यता प्रदिप जापान किन गएनन् ? के ले रोक्यो प्रदिपलाई ? के प्रदिप सिने सर्कल अवार्डबाट सम्मानित हुने पक्का भएको हो ? लगाएतका धेरै विषयहरुलाई लिएर विभिन्न गसिप समेत बनेका थिए भने अहिले सिने जगतमा यो हल्ला चलिरहेको छ कि कुन अवार्ड कसको भागमा छ त भनेर पहिलानै सबैमा अवगत थियो र प्रदिपलाई जापान जानबाट रोकियो ।
दिनेश डिसी तथा अन्य केहि व्यक्तिव संग नजिक देखिएका प्रदिपको पपुलर अवार्ड कतै यी सबैको सहानुभूति त हैन भन्ने विषयले पनि अहिले सिने जगतलाई तताई रहेको छ ।